Abenzi bephepha lesinyithi elenziwe ngesinyithi - China Umatshini wentsimbi ongenasici mveliso, abaXhasi
Amashiti e-201 e-Cold asongwe ngeSinyithi (0.2mm-3.0mm)
Ububanzi: 300mm - 1500mm, iimveliso emxinwa pls khangela iimveliso strip
304 / 304L Ingqele asongwe steel stainless sheets
Gqiba: 2B / 2D
I-310 / 310s i-Cold eqengqelekileyo iinyithi zentsimbi
316L316 Ingqele asongwe Stainless sheet (0.2mm-8mm)
Ububanzi: I-300mm-6000mm, iimveliso ezincitshisiweyo pls jonga kwiimveliso zomtya
Ubungakanani bephakheji: I-1.0-3.0MT
I-410 410s ebandayo eqengqelekileyo iityhubhu zentsimbi (0.2mm-8mm)
ixabiso sheet steel stainless olukhazimlisiweyo
Inkcazo elula malunga nexabiso lesinyithi elingenasici
Kuba tyaba steel stainless, ngesiqhelo likhazimlisiwe njengoko amashiti nako kuthetha ukutyeba obhityileyo, kodwa ngamanye amaxesha ipleyiti ziyatyeba kufuneka mfuneko ipolishiwe isicelo ekhethekileyo. Kwaye uninzi lweplate lukhazimliswe ngendlela yokucoca ngomatshini.
Indlela steel kusetyenziswa ipolishi：
Okwangoku iindlela ezisetyenziswa ngokuqhelekileyo zezi: ipolishi ye-electrolytic, ipolishi ye-electrochemical, ipolishing mechanical
Inkqubo yokucoca i-electrochemical yahlulwe yangamanyathelo amabini: (1) Ukulinganisa iMacro: imveliso echithakeleyo iyahluka kwi-electrolyte, kunye noburhabaxa bomhlaba bento iyancipha, iRal μm. (2) Low-ukukhanya sokulinganisa: nokwahlukana Anodic, ukukhanya komhlaba kuphuculwe.
Sino Stainless Steel Capacity malunga 304 sheet insimbi 304 steel stainless yinto eqhelekileyo intsimbi, mninzi ka 7.93 g / cm3, ekwabizwa ngokuba 18/8 insimbi. ezisetyenziswa kakhulu kushishino kunye ifanitshala uhombiso kushishino kunye nokutya kunye nonyango zonyango. Iindlela zokulebhelisha eziqhelekileyo kwintengiso zibandakanya i-0Cr18Ni9 kunye ne-SUS304, apho i-0Cr18Ni9 ngokubanzi ithetha ukuba ...
Isinyithi ngokubanzi esingenasici esinobunzima phakathi kwe-0.01-1.5mm, amandla phakathi kwe-600-2100N / mm2 kunye nentsimbi enganyangekiyo ebanda-engqengqelekayo engenasici ichazwa njengentsimbi ephezulu yokuchaneka ngentsimbi. Impazamo yokuchaneka kwepleyiti yesinyithi engenasiphelo kwinkqubo yokuvelisa incinci kakhulu kunephepha eliqhelekileyo. Ngokubanzi malunga ne-5um okanye nokuba kusezantsi.
NO.4 luhlobo lwenkqubo yonyango lokucoca umphezulu. Ukucoca kunye nokugqitywa kwephepha elingenasici kunye nezinto zokugaya ezinobungakanani be-150 ~ 180 njengoko kuchaziwe kwi-GB 2477.
Ukufakwa okuqaqambileyo yitekhnoloji yokuqhubekeka komhlaba, ngakumbi emva kokubanjwa kwindawo evalelweyo, iqondo lobushushu liyacothiswa kwisithuba esivalekileyo ubuncinci ngama-500 degrees emva koko lupholile ngokwendalo, kuya kubakho ukukhanya ukuze kungabangeli decarburization.